ABREGE D’UNE DOCTRINE DU DEVELOPPEMENT RURAL POUR MADAGASCAR – Blaogin'i Voniary
Père Henri de Laulanie – Association Tefy Saina
« Le développement de Madagascar doit se faire de l’intérieur, c’est-à-dire à partir de ses ressources propres et l’homme doit en être un acteur à part entière. »
Famintinana: Navondron’i Mompera de Laulanie ao anatin’ity tahirin-kevitra ity ny traikefa azony nandritra ny 25 taona niasany teto Madagasikara. Tsy nahomby teto Madagasikara hatrany ny fakan-tahaka ny modelin’ireo firenena hita fa nivoatra : Japon, Chine, Algérie sy ny sisa. Ny tena marina dia tokony miainga avy any amin’ny fototra ny fivoaran’ny tontolo ambanivohitra. Tokony esorina ao an-tsaina ny hoe : ny fandrosoana dia midika indostria sy ny hoe ny fivoarana sy ny teknolojia dia midika fandrosoana ara-toekarena. Ny indostria manko dia mahatonga fanimbana mihoa-pampana ny harena voa-janahary. Ary ny fanandevozan’ireo firenena mandroso ara-teknolojika dia aretina mikiky ny mpitondra sy ny mpandraharaha any amin’ny firenena mahantra.
Ny fenitra tokony hazava voalohany dia ny hoe samy hafa ny fandrosoana eny ambanivohitra sy ny fandrosoan’ny indostria. Fivoaran’ny teknika ampiasaina no ilain’ny mpamboly sy ny mpiompy. Manaraka izany, ny olona manontolo no tokony hivoatra : ny fari-pananany, ny toe-tsaina sy ny hareny ary indrindra ny fahaleovan-tenany ao anatin’ny fiaraha-mientana. Ny olona rehetra koa no tokony iara-handroso fa tsy ny vitsy an’isa. Ankoatra izay, ny fambolena sy ny fiompiana dia voafehin’ny fotoana sy ny toerana ary ny fifandraisany amin’ny sehatra hafa izany hoe fanodinana sy ny varotra. Tsy azo ampiharina be fahatany eo amin’ny tontolo ambanivohitra ny foto-kevitra ekonomika hita hatramin’izao satria ny fampivoarana ny famokaran’ny indostria no nodinihin’ireny. Tsy vitan’izay fa manana toe-tsaina miavaka ny tantsaha izay ekena fa misy fahatarany. Ilaina ary ny fanovana toe-tsaina mba hisian’ny fandrosoana marina miainga avy amin’ny tantsaha ary vokatry ny fanapahan-keviny.
Noho izany ny toko telo mahamasa-nahandro mampivoatra ny fiainan’ny tantsaha iray dia ny ao an-tokantrano, ny fambolena sy ny fiompiana ary ny asa tànana. Ilaina ny fanofanana ireo mpamboly sy mpiompy mba tsy hianona fotsiny amin’izay efa fantany izy ka hiezaka hampitombo ny tombon-tsoa voajanahary ary hioitra ny sakana apetraky ny natiora. Ny ao an-tokantrano indray dia ny tovovavy no hofanina hikarakara tokan-trano (sakafo, filaminana, fahadiovana…) mba ahatsapany fa misy fiainana tsara kokoa. Manaraka izany, ezahina ny hampahaleo tena ny tànana iray amin’ny alalan’ny famokarana ireo fitaovana enti-miasa eo an-toerana. Noho izany, mila mampitombo fahalalana koa ireo mpanao asa tànana sy mpikatroka amin’ny orinasa madinika. Ho fampiharana izany teti-kady izany ary dia ilaina ny fananganana ivon-teorana fampianarana ny tantsaha isan-kaominina. Rehefa miverina any amin’ny fianakaviany ireo mpandray anjara dia arahi-maso sy ampiana hatrany.
Ho fanampin’izany, ilaina koa ny manatsara ny fomba fambolena mba iatrehana ny fiovan’ny toetr’andro. Singanina manokana ny vary satria io no foto-tsakafon’ny Malagasy. Hita fa mahomby izao ny voly varo maro anaka (SRI) sy ny fanaovana voly avotra ka tokony ampiroboroboana. Ahitam-bokatsoa koa ny fambolena eny amin’ny havoana satria manakana ny fikaohan’ny riaka ny tany. Raha ny tokony ho izy ny teknika tsara ampandrosoana ny fambolena sy fiompiana eto Madagasikara dia izay tsy mitaky renivola betsaka sady tsy iandrasana fanampiana avy any ivelany. Tsy ny hanatrarana ny fambolena indostrialy any amin’ny firenena mandroso no atao tarigetra. Ny tena tanjona dia ny hahaveloman’ny tantsaha ny vokatry ny famboleny sy ny hananany ambim-bava amidy. Tsy maninona na mizotra miadana ny fivoaran’ny fiainan’ny tantsaha fa mila miaraka amin’ny fiovan’ny toe-tsaina izany. Miantraika kokoa amin’ny olona ny fandrosoana rehefa miainga amin’izay kely eo an-tànany sy ny heriny izy. Tokony anahaka ny ny fitombon’ny isan’ny mponina anefa ny fitombon’ny famokarana. Noho izany, ny fandrosoan’ny tontolo ambanivohitra dia antoky ny hoavin’i Madagasikara.
Hitanao ao amin’ny: http://www.tefysaina.org/abrege.htm
ambanivohitra, Association Tefy saina, fampandrosoana, fandrosoana, Père de Laulanie, SRI